Shuruudaha & Shuruudaha - Dukaamada eGay
Shuruudaha Adeegga iyo Shuruudaha
Shuruudaha iyo Shuruudaha loogu talagalay waxyaabaha lagu iibiyo bogga https://egay.shop.
Qodobka 1 - Walax
Xeerarkan iyo shuruudahaan waxay iibiyaan iibka Egay Shop ee https://egay.shop.
Websaydaan waxaa maamula Egay Shop. Dhamaan goobta, shuruudaha "anaga", "our" iyo "our" tixraac EShop Shop. EShop Shop wuxuu bixiyaa boggaan, oo ay ku jiraan dhammaan macluumaadka, qalabyada iyo adeegyada laga heli karo boggan adiga, qofka isticmaala, shardi ah aqbalaadda dhammaan shuruudaha, xaaladaha, siyaasadaha iyo ogeysiisyada halkan lagu sheegay.
Qodobka 2 - Shuruudaha Macaamiisha Online
Jebinta ama ku xadgudubka mid ka mid ah Shuruudaha waxay keeni doontaa in si dhakhso ah looga joojiyo adeegyadaada
Qodobka 3 - Xaaladaha Guud
Qodobka 4 - Xaqiijinta, Dhameystirka iyo Waqtiga Macluumaadka
Qodobka 5 - Qiimaha
Qiimaha alaabadeena waxaa lagu muujiyay Euros dhammaan canshuuraha (VAT iyo canshuuraha kale ee lagu dabaqi karo taariikhda amarka), haddii aan si kale loo sheegin oo ka reeban kharashka kaabajka iyo kharajka. Haddii dalabka dal kale oo aan ahayn magaalo-weynaha Faransiiska ah waxaad tahay soo-saaraha sheyga ay khusayso. Masuuliyadaha canshuurta ama canshuurta maxalliga ah ama hawlaha soo dejinta ama canshuuraha gobolka waa la bixin karaa. Xuquuqda iyo miisaaniyadani maaha mas'uuliyadda EShop Shop. Waxay noqon doonaan kharashka adiga oo ah masuuliyadaada kaliya, labadaba marka lagu dhawaaqo iyo lacag bixinta hey'adaha awoodda leh iyo hay'adaha wadankaaga. Waxaanu kugula talineynaa in aad wax ka weydiiso arrimahaan dhinacyada kala duwan ee deegaankaaga. Dhammaan amarrada ayadoon la tixgelin asalkooda asalka ah waxaa lagu bixin karaa Euros. EShop Shop wuxuu xaq u leeyahay inuu wax ka beddelo qiimaha wakhti kasta, laakin sheyga ayaa lagu soo rogi doonaa iyada oo ku saleysan qiyaasaha xooga marka la ansixinayo amarka oo ay ku xiran tahay helitaanka. Qalabka ayaa weli ah hantida bulshada EShop Shop ilaa inta buuxda ee qiimaha. Digniin: sida ugu dhakhsaha badan ee aad jir ahaan u haysatid alaabta la dalbay, khatarta lumitaanka ama waxyeellada alaabtu waa laguu wareejinayaa.
Qodobka 6 - Isbedelka Adeegyada iyo Qiimaha
Qodobka 7 - Qalabka ama Adeegyada
Qodobka 8 - Amarada
Waxaad dalban kartaa:
Macluumaadka qandaraaska ah waxaa lagu soo bandhigi doonaa Ingiriis waana la xaqiijin doonaa ugu dambeyn waqtiga lagu ansixiyey amarkaaga. EShop Shop wuxuu xaq u leeyahay inuu diido inuu diiwaangeliyo lacag, oo uusan u xaqiijin amar sabab kasta ha ahaato, gaar ahaan haddii ay jirto dhibaato keenaysa, ama haddii ay ku adagtahay amarka la helay.
Qodobka 9 - Xaqiijinta amarkaaga
Amar kasta oo ka muuqda bogga internetka ee https://egay.shop wuxuu u maleynayaa in adeecida shuruudaha iyo shuruudaha hadda jira. Xaqiijin kasta oo amar ah waxa ay ka dhigan tahay adegyadaada buuxda oo dhammaystiran ee xaaladaha guud ee guud ee iibka, iyada oo aan laga reebin ama kaydsi. Dhammaan xogta la bixiyay iyo xaqiijinta diiwaangelinta waxay noqon doontaa caddeyn muujinaysa macaamil ganacsi. Waxaad cadeyneysaa inaad leedahay aqoon dhammaystiran. Tixgelinta amarka waxay noqon doontaa mid u qalantaa saxiix iyo aqbalida howlaha la qabtay. Soo koobidda macluumaadka amarkaaga ayaa lagula soo xidhiidhi doonaa cinwaanka e-mailka ee xaqiijinta amarkaaga.
Qodobka 10 - Payment
Xaqiiqada ah inaad ku ansixinayso amarkaaga ayaa adiga kuu ah waajibaad ah inaad bixiso qiimaha la tilmaamay. Bixinta iibsiyadaada waxaa lagu sameeyaa kaarka deynta oo leh SSL oo la isku qorto qawaaniin ammaan ah.
Qodobka 11 - Bixinta, celinta iyo is-weydaarsiga
Nidaamkayagu wuxuu sii soconayaa maalmaha 30. Haddii maalmaha 30 ay baxaan tan iyo markii aad iibsatay, nasiib daro maaha inaan kuu soo celino lacag celin ama is dhaafsi.
Si aad xaq ugu yeelato soo noqoshada, sheygaaga waa in aan la isticmaalin oo xaalad la mid ah oo aad heshay. Waa inay sidoo kale ku jirtaa baakidhka asalka ah.
Alaabada aan la soo celin karin:
Waxyaabaha laga iibsado software
Qaar ka mid ah waxyaabaha daryeelka caafimaadka iyo shakhsiyaadka
Fadlan ha u dirin iibsashadaada soo-saaraha.
Waxaa jira xaalado gaar ah oo keliya lacagta soo celinta qayb ahaan:
Wax kasta oo aan ku jirin xaaladdiisa asalka ah, waa waxyeelo ama qaybo ka maqan sababo aan sabab u ahayn qaladkayaga
Wax kasta oo la soo celiyo wax ka badan 30 maalmood kadib dhalmada
Haddii laguu oggolaado, markaa dib ayaa laguu soo celin doonaa, oo dayn ahaan ayaa si toos ah loogu isticmaali doonaa kaarka deynta ama habka asalka ah ee lacag bixinta, maalmo cayiman.
Lacagaha soo noqoshada ama maqan
Haddii aadan weli helin wax lacag ah, horey u hubi xisaabta bangiga mar kale.
Ka dibna la xiriir shirkada kaararka deynta, waxay qaadan kartaa wakhti ka hor inta aanad si rasmi ah uugu soo dirin.
Kala soo xiriir bangigaaga. Inta badan waxaa jira wakhti go'an oo ah ka hor inta aan laguu soo celin.
Haddii aad sidaan oo dhan sameysay oo aadan wali wali helin lacagtii lagaa lahaa, fadlan nagala soo xiriir adiga oo gujinaya HALKAN.
Waxyaabaha iibka ah:
Soo-celinta alaabada iibka waxay ku saleysan tahay qiimaha iibka.
Waxaanu kaliya bedelaynaa alaabta haddii ay yihiin kuwo khaldan ama dhaawacmay. Haddii aad ubaahan tahay inaad ku bedesho shaygaas, noo soo dir email ku soo hello hello@egay.shop.
Haddii alaabta loo calaamadeeyey hadiyad markii aad soo iibsatay oo si toos ah kuu siisay, waxaad heli doontaa dhibco hadiyad ah qiimaha soo noqoshada. Marka sheyga la soo celiyo la helo, shahaado hadiyad ayaa laguu soo diri doonaa.
Haddii sheyga aan loo calaamadeeynin hadiyad markii uu soo iibsaday, ama bixiyaha hadiyaddu ay amar ku siiyeen in ay ku siiyaan waqti dambe, waxaan kuu soo celineynaa lacag bixiyaha oo uu ku ogaanayo ku soo noqoshadaada.
Adiga ayaa mas'uul ka ah bixinta qarashaadkaaga maraakiibta si aad ugu soo celiso sheygaaga. Kharashka dhoofka waa lacag la'aan. Haddii laguu soo celiyo lacag celin, kharashka dib u celinta maraakiibta ayaa laga jarayaa lacagta laguu soo celinayo.
Iyada oo ku xiran meesha aad ku nooshahay, waqtiga uu qaadan karo alaabta aad is dhaafsatey inuu kuu soo gaaro, wuu kala duwanaan karaa.
Haddii aad u soo dirayso shay ka badan $ 75, waa inaad ka fakartid isticmaalka adeegga maraakiibta dabiiciga ah ama iibinta caymiska maraakiibta. Kama dammaanad qaadano inaan helno alaabtaada la soo celiyay.
Qodobka 12 - Halkaan
Badeecadeenu waa la bixiyaa illaa iyo inta ay ka muuqdaan shabakadda https://egay.shop iyo xuduudaha kaydka la heli karo. Alaabooyinka aan la soo saarin, dalabkayagu waa mid mowduuc ku xiran helitaanka alaab-qeybiyeyaasheenna. Haddii aysan jirin wax alaab ah markaad amarkaaga bixiso, waxaanu kuugu soo wargalineynaa email ahaan. Amarkaaga ayaa si toos ah loo baabi'in doonaa lana xisaabin doono bangiga.
Qodobka 13 - Bixinta
Badeecadaha waxaa la geeyaa cinwaanka dhalashada ee lagu tilmaamey inta lagu gudajiro habka nidaamka, wakhtiga lagu tilmaamayo bogga xaqiijinta. Haddii ay dhacdo dib u dhac, email ayaa loo diri doonaa si laguu ogeysiiyo natiijada suurtogalka ah ee ku saabsan wakhtiga dhalashada ee laguu tilmaamay. Haddii ay dhacdo in la gudbiyo gudbiye, Egay Shop looma qaadi karo mas'uuliyadda bixinta geerida sababta oo ah macquul maahan macaamilka ka dib marka la soo jeediyo dhowr ah oo loogu talagalay balamaha. Xaaladda gaarsiinta meel ka baxsan Midowga Yurub, canshuur dheeraad ah ayaa lagu dabaqi karaa caadooyinka marka laga soo galo dalka la wareegay bixinta. Canshuurahani waa masuuliyada qofka helaya amarka.
Qodobka 14 - Xaqiijinta Macluumaadka Bixinta iyo Xisaabta
Waxaan xaq u leenahay inaan diidno amar kasta oo aad nala soo xidhiidho. Waxa laga yaabaa, in aanu ku tiirsanaan karno, xaddidno ama tirtirno tirada alaabta la iibsaday qofkiiba, qoyskiiba ama amar kasta. Xayiraadyadaas waxaa ka mid ah amarrada ay ku hoos jiraan ama isla koontada macaamiisha, isla credit card, iyo / ama amarro isticmaalaya isla biilka iyo / ama mootada. Haddii ay dhacdo in aan isbeddel ku sameyno amaba joojino amar, waxaan isku dayi karnaa inaan ku ogeysiinno adoo la soo xiriiraya e-mail iyo / ama cinwaanka biilka / lambarka taleefanka ee la bixiyey wakhtigii loo qabtay. Waxaannu xaq u leenahay inaan xaddidno ama mamnuucno amarro in, xukunka keligiis ah, ay u muuqdaan in lagu meeleeyo ganacsatada, iibiyeyaasha ama qaybiyaasha.
Qodobka 15 - Qalabka Ikhtiyaarka ah
Waxaan sidoo kale laga yaabaa, mustaqbalka, inay bixiyaan adeegyo cusub iyo / ama muuqaalada iyada oo loo marayo websiteka (oo ay ku jiraan, sii-deynta qalabka cusub iyo ilaha).
Tilmaamaha cusub iyo / ama adeegyadani waxay sidoo kale ku xirnaan doonaan shuruudaha adeegga.
Qodobka 16 - Xiriirada Saddexaad ee Xisbiga
Kuma masuul ka ah waxyeello ama waxyeelo la xidhiidha iibsashada ama isticmaalka alaabada, adeegyada, ilaha, mawduuca, ama wax kasta oo kale oo la sameeyo oo la xiriira bogga internetka ee sadexaad. Fadlan si taxadar leh u fiirso siyaasadaha iyo hab-dhaqannada dhinac saddexaad iyo inaad hubiso inaad fahamto ka hor intaadan ku dhaqaaqin wax macaamil ah.
Cabashooyinka, sheegashooyinka, cabashooyinka, ama su'aalaha ku saabsan alaabada saddexaad waa in loo soo gudbiyaa dhinac saddexaad.
Qodobka 17 - Faallooyinka Macmiilka, Soo-celinta iyo Soo-jeedin Kale
Waxaad ogolaatay in faallooyinkaagu aysan ku xad gudbin xuquuqda cid kasta oo sadexaad, oo ay ku jirto xuquuqda daabacaadda, alaabooyinka, asturnaanta, shakhsiga ama xuquuqda shakhsi ahaaneed ama shakhsi kale. Waxaad kaloo sii raacsan tahay in faallooyinkaagu aysan ka koobnaan doonin xad-gudub ama sharci-darro, sharci-darro ama qalqal-abuur, ama ku jira fayraska kombiyuutarka ama khayaanada kale ee wax kasta oo saameeya howlaha adeegga ama bogga kale ee la xiriira. Ma isticmaali kartid cinwaanka e-mail been ah, iska dhig inaad tahay qof aanad kali aheyn, ama si kale u marin habaabin ama saddexaad dhinacyada asalka ah wixii faallooyin ah. Adigaa masuul ka ah wixii faallooyin ah ee aad sameyso iyo saxsanaanta.
Wax masuuliyad ah kama qaadno mana qaadanayno wax mas'uuliyad ah wixii faallooyin ah oo adiga kugu soo qoray ama cid saddexaad.
Qodobka 18 - Macluumaadka Shakhsi ahaaneed
Qodobka 19 - Khaladaadka, Xaqiiqooyinka iyo Maqnaanshaha
Wax ka qabashada waajib kuma ah inaan cusbooneysiinno, wax ka bedelno ama aan cadeyno macluumaadka Adeegga ama bogga kale ee la xiriira, oo ay ku jiraan xadid la'aan, macluumaadka qiimaha, marka laga reebo sida uu sharcigu farayo.
Ma jiro taariikh cusub oo la cusbooneysiiyay ama cusbooneysiin lagu dabaqay Adeegga ama bogga kale ee la xidhiidha, waa in la qaataa si loo muujiyo in dhammaan macluumaadka Adeegga ama wax kasta oo la xiriira la bedelay ama la cusbooneysiiyey.
Qodobka 20 - Isticmaalid La Mamnuucay
Qodobka 21 - Sheegashada Caymiska; Xaddidaadda Mas'uuliyadda
Xaalad kasta ha ahaato Egay Shop, agaasimayaasheena, saraakiisha, shaqaalaha, shirkadaha, wakiilada, qandaraaslayaasha, shaqo joojiyaha, alaab-qeybiyeyaasha, bixiyeyaasha adeegga ama shati-bixiyeyaasha ayaa masuul ka ah waxyeellada, lumista, sheegashada, ama wax toos ah, ama waxyeelo soo gaartay nooc kasta, oo ay ka mid tahay, aan xadidnayn faa'iido la'aanta, dakhliga lumay, keydka lumay, lumista macluumaadka, kharashka beddelka, ama waxyeelo la mid ah, ha ahaato mid ku salaysan qandaraas, caday (oo ay ku jirto dayacaad), masuuliyad adag ama haddii kale, adeegsiga adeeg kasta ama adeeg kasta oo lagu iibsado adeegga, ama wixii dalab kale oo la xidhiidha si kasta oo aad u isticmaasho adeegga ama shey kasta, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, qalad kasta ama maqnaansho kasta, ama wixii khasaaro ah ama waxyeelo ah nooc kasta oo ay keento isticmaalka adeegga ama wax kasta oo ah (ama sheyga) oo la soo dhajiyey, la gudbiyey, ama haddii kale laga helayo adeegga, xitaa haddii lagugula taliyay suurtagalnimada.
Sababtoo ah dawlad-goboleedyo qaarkood ama aan awood u lahayn in ay u oggolaadaan ka-saarista ama xaddidaadda mas'uuliyadda waxyeelada soo gaartay ama waxyeellada ah, ee dawladahaas ama degaannadaas, mas'uliyadeena waa in ay xadidan tahay inta ugu badan ee sharcigu ogol yahay.
Qodobka 22 - Lacageed
Waxaad ogolaatay inaad magdhowdo, difaacdo oo aad qabsato wax aan khasaare aheyn oo aan wax khasaare ah u geysaneyno shirkadeena, waalidkeena, shirkadaha, shirkadaha, lamaanayaasha, saraakiisha, agaasimayaasha, wakiilada, qandaraaslayaasha, shatiyeyaasha, bixiyeyaasha adeegga, shirkadleyda, alaab-qeybiyeyaasha, shaqo-joojinta iyo shaqaalaha, khidmadda qareenka macquulka ah, oo ay sameeyeen cid kasta oo sadexaad u sabab ah ama ka soo baxdo jebinta Shuruudaha Adeegga ama dukumintiyada ay ku dhex jiraan tixraaca, ama ku xadgudubka sharciga ama xuquuqda dhinac saddexaad.
Qodobka 23 - Waxyeelo badan
Qodobka 24 - joojinta
Qodobka 25 - Heshiiska Dhammaan
Qodobka 26 - Mas'uuliyad
Qalabka la soo jeediyey wuxuu u hoggaansamayaa sharciga Faransiiska ee xooggan. Masuuliyadda Egay Shop ma noqon karto mid ku lug leh kiis aan ku hoggaansameyn sharciyada dalka ee sheyga la keeno. Waa masuuliyadaada inaad hubiso maamulka degaanka fursadaha soo dejinta ama isticmaalka alaabta ama adeegyada aad doonayso inaad dalbato. Intaa waxaa dheer, Shirkadda laguma masaafurin karo magdhowyada ay sababtay si xun u isticmaalida alaabta iibsatay. Ugu dambeyntii masuuliyadda Shirkadda looma qaadi karo masuuliyadda wixii dhib ah ama waxyeelo u geysanaya isticmaalka Internetka, oo ay ku jiraan fasax adeeg, dibadda dibadda ama jiritaanka fayrasyada kombiyuutarka.
Qodobka 27 - Sharciga la dabaqi karo haddii ay dhacdo muran
Shuruudaha Adeegyada iyo heshiisyada gaarka ah ee aan ku siinno Adeegyada waa in lagu maamulaa oo lagu muujiyaa sida waafaqsan sharciyada Faransiiska.
Luqada heshiiskaan waa Ingiriis. Shuruudaha iibka waxay ku xiran yihiin sharciga Faransiiska. Haddii ay dhacdo muran, maxkamad Faransiisku waxay noqon doontaa mid ku haboon.
Qodobka 28 - Hantida Aqoonta
Dhammaan waxyaabaha ku jira shabakadda https://egay.shop waa kuwo leh oo ku hadhay hantida garashada iyo khaaska ah Shirkadda ama dhinacyada saddexaad ee awood u leh Shirkadda si ay uga faa'iidaystaan. Qofna looma oggola inuu soo saaro, la istcimaalo, dib loo soo raro, ama u isticmaalo ujeeddo kasta oo kasta, xitaa qayb ahaan, walxaha goobta ee software-ka, muuqaalka ama dhawaaqa. Xidhiidh kasta oo fudud ama qumman ayaa si adag loo mamnuucay iyadoon ogolaansho qoraal ah oo cadaan ah Shirkadda . Sababaha gaarka ah ee alaabtu waxay tilmaameen sida tan oo kale ee sharaxaadoodu waa hantida garashada iyo khaaska ah ee Shirkadda. Qof kasta oo dabiici ah ama kan sharciga ah nuqul ka ah dhammaan ama qeyb ka mid ah naqshadahan waa la ciqaabi karaa.
Qodobka 29 - Isbedelka Shuruudaha Shaqada
Qodobka 30 - Macluumaadka Xiriirka
Su'aalaha ku saabsan Shuruudaha Adeega waa in loo soo diraa adiga oo gujinaya HALKAN.